दुनियाँका सबैभन्दा डरलाग्दा ठाउँ – newslinesnepal
दुनियाँका सबैभन्दा डरलाग्दा ठाउँ
प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७५, बुधबार ०९:१७
दुनियाँमा निकै सुन्दर ठाउँहरुको कमी छैन । तर कतिपय ठाउँहरु भने निकै सुन्दर हुनुका बाबजुत आजसम्म पनि बिरानो बनिरहेका छन् अनि डरलाग्दो ठाउँका रुपमा चर्चित छन् । त्यस्ता ठाउँमा जान मानिसहरुले आँट गर्दैनन् । दुनियाँका डरलाग्दा ५ ठाउँ यी हुन्ः
१. डरलाग्दो गुडियाको टापु
मेक्सिको सिटीको बाहिरी इलाकामा रहेको आइल्याण्ड अफ दी डल्स अर्थात् गुडियाको टापु हजारौँ डरलाग्दा गुडियाको घर हो । टापुमा रहेका रुख तथा पर्खालहरुमा यस्ता गुडिया झुण्डाइएको हुन्छ । यी टाँगिएका गुडियाहरुको पछाडि एक रहस्यमय कहानी छ । किम्बदन्तीका अनुसार उक्त टापुको हेरचाह गर्ने एक मानिसले ती गुडियाहरु त्यहाँ टाँगेको थियो । उक्त व्यक्तिले समुद्री तटमा एकजना बालिकालाई अनौठो हालतमा मरेको अवस्थामा शव फेला पारेको थियो । उक्त बालिकाको लासको नजिक एक गुडिया पनि भेटिएको थियो । उसले ती बालिकाको अन्त्येष्टि गरेर गुडियालाई नजिकको रुखमा झुण्डाइदियो ।
त्यसपछि उक्त मानिसले डरलाग्दा सपना देख्नुका साथै मरेकी बालिकाको आवाज सुन्न थाल्यो । उक्त घटनापछि ती व्यक्तिले आफ्नो जीवनका बाँकी ५० वर्ष सोही खालका गुडियाहरु टापुका विभिन्न ठाउँमा टाँगेर बिताए । अर्को अनौठो घटना पनि भयो । उक्त व्यक्तिको मृत्यु हुँदा उसको शव तिनै बालिकाको शव अन्त्येष्टि गरिएको ठाउँमा फेला परेको थियो ।
२. बुल्गेरियन कम्युनिष्ट पार्टी भवन
सन् १९८१ मा बनेको उक्त ठाउँ सोभियत कालमा बुल्गेरियन कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्र थियो । तर एक दशकभन्दा पनि कम समयमा सोभियत संघका सदस्य देश तथा गैर सदस्य देशको बीचको सीमा आइरन करटेन टुटेसँगै यो भवन सोभियत युगको अन्त्यको प्रतीक बन्यो ।
तत् पश्चात यो भवन जर्जर बन्दै गयो र खण्डहर बन्यो । पछि यो ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने कोसिस गरियो । तर पनि लागत निकै उच्च लाग्ने भएपछि त्यो पनि हुन सकेन । अहिले उक्त भव्य भवन भूतघर जस्तै डरलाग्दो ठाउँ बनेको छ ।
३. मार्लबोरो मानसिक अस्पताल
अमेरिकामा आफ्नो जमानाको इतिहासकै रुपमा रहेको यो अस्पताल सन् १९३१ मा खुलेको हो । अस्पताल सञ्चालन भएको ६५ वर्षको समयमा यसमा अनेक खालका रहस्यमय घटनाहरु भए ।
अस्पतालबाट बिरामीहरु अचानक गायब हुने, मानिसहरुले आत्महत्या गर्ने तथा स्वास थुनिएर मर्नेलगायतका घटना भएका थिए । यस्ता घटना धेरै भएपछि सरकारले गोप्य रुपमा त्यसको जाँच गरायो । एकजना सांसद कर्मचारीको भेषमा अस्पतालमा छिरे । उनलाई बाहिरी कटेजमा काम गर्न भनियो । अस्पताल प्रशासनले ती व्यक्ति अस्पतालमा भैरहेका घटनाको रहस्य पत्ता लगाउन कर्मचारीको रुपमा भर्ना भएर अस्पतालमा छिरेको पत्तो पाएनन् । अस्पतालमा कर्मचारीको भेषमा काम गर्दा ती सांसदले उक्त अस्पतालमा बिरामीहरुमाथि पछिल्लो ६० वर्षदेखि बिरामीहरुको शोषण तथा गैरकानूनी चिकित्सा प्रयोग गरिँदै आएको पत्ता लगाए । अस्पतालको त्यस्तो कर्तुत पत्ता लागेसँगै सरकारले अस्पतालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर बन्द गरिदियो । तत् पश्चात् यो अस्पताल भवन खण्डहरु बन्दै गएको छ । मानिसहरु त्यहाँ जान डराउँछन् आजकल ।
४. कोलम्यान स्कोप
२० औँ शताब्दीको सुरुवातमा जर्मन उपनिवेशद्धारा स्थापना गरिएको यो सहर नामिबियाको नामिब मरुभूमिमा रहेको छ । यो सहर सन् १९५० यता बिरानो ठाउँको रुपमा खण्डहरु बन्दै गएको छ । जर्मनहरु हीरा जवाहरातको खोजीमा त्यहाँ आएका थिए । आफ्नो काम पूरा भएसँगै जर्मनहरु फर्केर गए र सहर खाली भयो । अहिले त्यहाँ काठका जीर्ण भवनहरु छन्, जसको बीचमा बालुवा भरिएको छ । यहाँ मानिसहरु जान डराउँदछन् ।
५. प्रिपेयत सहर, युक्रेन
सन् १९८६ को अप्रिल २६ मा यो सहरको नजिकै रहेको चेर्नोबिलमा मा आणविक भट्टी विस्फोट भएको थियो । उक्त आणविक दुर्घटनाबाट फैलिएका विकिरणले यस सहरमा ३१ जनाको मृत्यु भयो भने झण्डै चार लाख मानिसहरु विस्थापित भए । अहिले यो सहर खाली छ । हावा तथा जमिनमा विकिरणको मात्रा भएकोले मानिसहरु यहाँ बस्दैनन् । घरहरु खण्डहर बनेका छन् र सहर भुताहा सहरजस्तै बनिसकेको छ ।